Usoro eji / Iwu -
Ị pụrụ ịhụ na ọnọdụ nke ngwaọrụ na map ma ọ bụ nwere ike inwe ya ọnọdụ GPS ozugbo site na onye ọrụ akara panel.
You can track all history of calls including time, oge, contact name… and record each call for you.
Ị nwere ike soro na-elekọta mmadụ IZIRỊTA égwu ndị dị otú ahụ dị ka Whatsapp, Viber, Yahoo ozi, Facebook, Skype ...
Track the history of websites visited from devices. Gbochie ihe nrụọrụ weebụ ị achọghị iche ọrụ ileta.
Nkeji edemede 1 - Akporo.
The n'ozuzu ọnọdụ nke ire-eme nanị ka anyị na ebe nrụọrụ weebụ. Onye ọ bụla nke na-eleta ma ọ bụ na-eme ka a zụọ site na saịtị ikweta na ndị nwere ike itinye ọnọdụ kọwara n'okpuru ebe a, na bụ nke iwu afọ na ọ bụghị n'okpuru guardianship.
Ị ghọta na ọ na-agụ usoro ndị a na ọnọdụ n'ihu ịtụkwasị ka. Debere ihe ka na-apụta na gị n'ụzọ zuru ezu na dum iji usoro ndị a na ọnọdụ. Ọ dịghị nkwekọrịta nke ire n'etiti ndị ahịa na anyị naanị dị ka nke nnabata gị ka anyị. Na nnabata ga-lere zuru ezu na a ga-lere na a n'ụzọ dị irè gwara n'oge zigaara site anyị email ikwado na gị ka e shipped
Nkeji edemede 2 - Mgbanwe nke Ọnọdụ nke ire.
Anyị nwere ike gbanwee ndị a Okwu nke Jiri n'oge ọ bụla, n'okpuru mgbanwe iyi na anyị na saịtị. Ị na-Ya mere dụrụ ọdụ ka na-ezo aka mgbe nile ka ndị ọhụrụ na mbipute nke Okwu nke Jiri na-adịgide adịgide n'ebe a.
Nkeji edemede 3 - Wụk.
Tupu iwu, biko rịba ama nkọwa nke ngwaahịa na ị chọrọ ịzụ. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na n'agbanyeghị na anyị idap ngwaahịa ndị gosipụtara na-abaghị uru mgbe gị ka, anyị iche dịghị ibu. The data dekọrọ weebụ ịbụ ihe àmà nke ka. The data e dere site na ugwo usoro werekwa akaebe nke ego azụmahịa.
Nkeji edemede 4 - Efu.
Anyị na-edebe ikike ịgbanwe ego mgbe ọ bụla na-enweghị amamọkwa.
Nkeji edemede 5 - Ịkwụ Ụgwọ.
Ịkwụ Ụgwọ ahụ dum ka a ga-mere mgbe iwu site purchaser. Mgbe ọ bụla oge, ịkwụ ụgwọ apụghị weere dị ka obere oge. Ka ịtọọ ka, na ozu ahia nwere niile n'aka nke ịkwụ ụgwọ zoro aka na iji ụdị. The ozu ahia jide n'aka na ngwaahịa emewo ikikere mkpa iji ụzọ nkwụnye ụgwọ ọ họọrọ, mgbe Ndekọ nke zụọ ka.
The exactspy.com ọdọ ikike kwụsịtụ ma ọ bụ kagbuo ọ bụla wee na- / ma ọ bụ nnyefe, irrespective nke ha ọdịdị na ọkwa nke ịrụ ọrụ, n'ihi na ndị na-abụghị ugwo ọ bụla ego nkwụnye site purchaser, ma ọ bụ ihe mere ịkwụ ụgwọ.
Nkeji edemede 6 - Disclaimer.
exactspy gaghị e atụba maka ọ bụla kpọmkwem ma ọ bụ apụtachaghị ìhè nke nwere ike ibilite si zụọ nke na ngwaahịa. Mkpokọta ma ọ bụ ele mmadụ anya n'ihu enweghị ike iji ngwaahịa, emezughị ruru ka incompatibility ngwá apụghị eweta ibu exactspy ma ọ bụ nye mbili ọ bụla ụgwọ ma ọ bụ reimbursement.
Hypertext njikọ saịtị ndị ọzọ. exactspy disclaims ọ bụla ibu ke bụrụ na ebe ọdịnaya nke saịtị ndị a na-emerụ ndị iwu na ụkpụrụ.
N'ime ókè nke ihe a ka iwu, ụlọ ọrụ ahụ na-enye exactspy, exactspy.COM na saịtị ahụ na ya dị na ihe "dị ka bụ" na-eme ka ọ bụla yiri ma ọ bụ na-enye dịghị akwụkwọ ikike nke ụdị ọ bụla, ma awara awara ma ọ bụ echiche banyere ya ọrụ ma ọ bụ ya ọdịnaya.
Niile ozi tinyere okwu banyere nnweta na ime nke ngwaahịa na saịtị exactspy enweghị contractual uru.
Tụkwasị na exactspy adịghị na-anọchite anya, ma ọ bụ nye ikike na ozi inweta site na saịtị exactspy.COM bụ ezi, zuru ezu ma ọ bụ ugbu a.
Nkeji edemede 7 - Nka na ụzụ ọrụ.
exactspy adịghị nwere ọrụaka ọrụ nke ngwaahịa ndị na-ere na saịtị. Ngwaahịa na-awa na ntụziaka akwụkwọ ntuziaka na French na ngwaahịa na / ma ọ bụ English.
Nkeji edemede 8 - Na iwu.
Nke a nkwekọrịta bụ n'okpuru iwu. Asụsụ nke akwụkwọ a bụ French. Bụrụ na nke esemokwu ụlọikpe nke French State ga nwere ikike.
Nkeji edemede 9 - Azọrọ.
N'ihi na mkpesa nile Kpọtụrụ anyị
Nkeji edemede 10 - MMS na-eziga.
Dị na-iwu nke mba ụfọdụ, i kweere iziga MMS ozi dere spyware ka a na-aga ikike site Mgbakọnata mba. Ọ bụla mgbalị izitere a mba onye iwu anaghị ekwe ka a ọrụ (tụlee eziokwu nke na-ezipụ a spyware na-enweghị ihe ọmụma nke a onye) pụrụ ịkpata iwu ihe megide gị site na nnabata.
Nkeji edemede 11 - Ncheta
exactspy software a na-eresị ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị nwere ekwe ntị nke na ha chọrọ ijide onwe ha iji.
Nke a oji kwere ka naanị insofar dị ka ọ na-eduziri dị na iwu na ike na mba na nkwanye ùgwù maka nzuzo nke ndị ọzọ.
Ọ bụ ibu ọrụ nke onye ọrụ nke software exactspy ka inyochaa na ojiji ha bụ isiokwu niile na ọdabara iwu obodo na ala ya na otu onye nke na-eji software.
Ọ kachasị, a machibidoro iwu iji ya maka ebumnuche kọwara dị ka aghụghọ, unbeknownst na onye ahụ na-eji ekwentị.
Site na nbudata na na na wụnye software na ekwentị exactspy, i kweere ka nwere ndị mobile na na ya nkwekọrịta na a mobile ọrụ bụ na aha gị.
Ọ bụ adịghị ezu-abụ nanị ịgụ nke na ndenye aha ma ọ bụ naanị onye nwe mobile. Ị na-ekweta na iji ị na-eme ka uche n'ihe niile dị na iwu na ike na mba na mba ebe o nwere ike ma ọ bụ ga-eji.
Save SMS, ntị mkparịta ụka, chọta ọnọdụ nke a agagharị eme na-aju ma ọ bụrụ na ha na-rụrụ na ntị nke ndị ọzọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ na- / ma ọ bụ ndị na-eji ekwentị na exactspy:
– Unu nwere ike iji gbanyụọ software
– Na-adịghị asian na ide software atụmatụ
– Na ha kwekọrịtara na ya iji bụghị e nyere doro anya na ide na unconstrained na akpachara.
Ebe ndokwa ndị a na-adịghị ẹka, onye ma ọ bụ kwadoro aka na ihe ndị a mara ya ikpe mebiri nke nzuzo nke ndị ọzọ.
Ọ ga-abụ punishable dị ka mpụ koodu obodo ya ga-ezipụta isiokwu.
exactspy na resellers iche dịghị ibu na-abụghị maka ọ bụla n'ụzọ na / ma ọ bụ mebie mere site na ya ma ọ bụ software ya na ngwaahịa. Nke a bụ njedebe onye ọrụ na onye na-ahụ ọrụ ùgwù niile iwu obodo ya nke obibi na ndị nke na software ike-eji exactspy. Site ịzụta na nbudata na software exactspy, ị kwenyere ndị e kwuru n'elu.
Ị bụ n'ime iwu
Insofar dị ka ekwentị na ndebanye aha na mobile ọrụ nwekwaranụ ahụ nke onye na - na ọkikpe, nche, wdg. - Ma ọ bụ, kwadoro (ụlọ ọrụ, Mkpakọrịta, òtù, wdg ..) Ọ asian na-ekweta na ide, na-enweghị ihe ọ bụla mmanye bụla, na ya aga na oku ekwentị, SMS na E-mails ike mara site ụlọ ọrụ, software iji bụ iwu.
Ọ na-Otú o sina dị ukwuu tụrụ aro iji chọpụta na a iwu ike ma ọ bụrụ na ọ dịghị ọzọ constraints tụlee na-akwanyere iwu na ike ná mba ahụ na-eji software.
A mkpachara anya ẹka, ị ga-enwe obi ụtọ ka melite arụpụtaghị gị egwuregwu ma na-anọgidesi nke ozi na na nkwukọrịta zigara ibe gị ahịa na suppliers.
Na bụrụ na nke ezinụlọ, site na eziokwu ahụ bụ na ẹkekpemede ma ọ bụ na-nwe ma ọ bụ ngalaba-nwe nke ekwentị mkpanaaka ịgụ ma ọ bụ na nkwonkwo ịgụ nke na ndebanye aha na mobile ọrụ, ma ọ bụrụ na nwa ahụ na-abịa nke afọ ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ọ bụ isi ma na-ekweta na-ede na ya oku ekwentị, SMS na E-mails pụrụ ntị ma na-agụ dị na iwu nke mba, ị n'ezie nwere ikike iji ohere awa site exactspy karịsịa na ndị ọzọ nwa-echebe site na ihe ize ndụ ndị dị otú ahụ dị ka ime ihe ike n'ụlọ akwụkwọ, racketeering, ọgwụ, pedophilia, ka banyere naanị ndị kasị kpọsara.
Ị bụ iwu na-akwadoghị
Otú ọ dị, ọ bụghị iwu na iledo. Gee ntị na fon mkparịta ụka na-enweghị ikike, na ekwentị nke onye ọzọ, unbeknownst ya, na-eso ya aga, intercept ya ozi ederede, wdg.
Ị ghọta na ọ na-agụ okwu ndị a na ezi akọ na uche. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ndị ọzọ, kpọtụrụ anyị site na anyị ụdị kọntaktị..